Masuuliyadeena - Sichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd.
Go'an Oo Waara
Mas'uuliyadda dadka, bulshada iyo deegaanka
Maanta "masuuliyadda bulshada ee shirkadaha" waa bushimaha ugu kulul adduunka. Tan iyo aasaaskii shirkadda ee 2010, Yinye mas'uuliyadda dadka iyo bay'ada ayaa qaadatay doorka ugu muhiimsan, taas oo had iyo jeer walaac weyn ku haysay aasaasaha shirkadeena.
Shakhsi kasta oo Tirsan
Masuuliyadayada saaran shaqaalaha
Shaqooyin Sugan / Waxbarasho Cimri dheer / Qoys iyo Xirfad / Caafimaad qab kuna habboon ilaa hawlgab. Yinye, waxaan qiime gaar ah siinaa dadka. Shaqaalaheennu waa waxa naga dhigaya inaan noqonno shirkad xoog leh, waxaan isula dhaqannaa si xushmad leh, qadarin leh, iyo dulqaad. Diiradeena macaamiisheena gaarka ah iyo koritaanka shirkadeena ayaa kaliya lagu suurtageliyey iyada oo ku saleysan aasaaskan.
Waajibaadka naga saaran deegaanka
Waxyaabaha keydinta tamarta / Qalabka wax lagu duubo ee Deegaanka / Gaadiid Fudud
Anaga ahaan, ilaali xaaladaha nololeed ee dabiiciga ah intii suurtagal ah. Halkan waxaan dooneynaa inaan wax ku biirino deegaanka wax soo saarkeena iyo wax soo saarkooda, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa u adeegsan doona dharkeena si loo hagaajiyo waxtarka tamarta ee xafiiska iyo dhismayaasha la degan yahay.
Aan jeclaano dabeecada; aan ku raaxeysto qoraxda.
Gargaarka Dhulgariirka / Ku deeqa Maaddooyinka Difaaca / Hawlaha Samafalka ah
Yinye wuxuu had iyo jeer qaadaa masuuliyada wadajirka ah ee tabashada bulshada. Waxaan kaqeyb qaadanaa yareynta saboolnimada bulshada. Horumarinta bulshada iyo horumarka shirkada lafteeda, waa inaan fiiro gaar ah u leenahay yareynta saboolnimada iyo inaan sifiican u garabsano masuuliyada yareynta saboolnimada.
Shabakada suuq geynta iyo adeegga ee Yinye ee caafimaadka waxay kahadashay dhamaan gobolada aduunka. Hadafka shirkaddu waa "In la horumariyo bayoolajiyadda iyo in laga faa'iideysto caafimaadka aadanaha".
N5-809, xarun caalami ah, 1700 Tianfu Avenue North, Aagga tiknoolajiyada sare, Chengdu, Sichuan, Shiinaha